म कसरी केपीलाई ‘आई लभ यू’ भन्न सक्छु ? « Janata Samachar
म कसरी केपीलाई ‘आई लभ यू’ भन्न सक्छु ?
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का युवा नेता दामोदर अर्यालले आफूले केपी ओली ‘आई लभ यू’ भन्न नसकेकाे बताउनुभएकाे छ । आफ्ना केही शुभचिन्तकले तिमीले केपी किन छौड्यौ भनेर प्रश्न गरिरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै अर्यालले आफूले केपीलाई त्यागेकाे नभई जनताको बहुदलीय जनबादको मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने केपी ओली त्यागेको बताउनुभएको हाे । आफूले मदन भण्डारीको विचारमा सतिसालझैं उभिने केपी चाहेको तर जनताद्वारा निर्वाचित संसदको अकारण विघटन गर्ने केपी नचाहेको सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत अर्यालले प्रष्ट पार्नुभएको हो ।
आफ्ना केही शुभचिन्तकहरुले तिमीले केपी किन छौड्यौ भनेर प्रश्न गरिरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै अर्यालले अगाडि लेख्नुभएको छ, ‘मेरा केही शुभचिन्तकहरु मलाई सोध्छ्न, तिमीले केपी किन छोड्यौ ? म भन्छु, मैले केपी कहाँ छोडेको छु ? म त केपी खोजिरहेको छु । जनताले चुनेको संसद अकारण बिघटन गर्ने केपी होइन, जनप्रतिनिधिमुलक व्यवस्स्था स्थापना गर्न १४ बर्ष जेल बस्ने केपी खोजिरहेको छु । जनताको बहुदलीय जनबादको मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने केपी होइन, मदन भण्डारीको विचारमा शतिसालझैँ उभिने केपी खोजिरहेको छु ।’
‘पार्टीको बैठकहरुलाई छल्ने र भाग्ने केपी होइन, त्यहाँ आफ्ना कुरा दृढतापुर्वक राख्दै प्रतिष्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्ने केपी खोजिरहेको छु । भारतिय गुप्तचर संस्थाको प्रमुखसँग रातारात गोप्य मन्त्रणा गर्ने केपी होइन, भारतीय नाकाबन्दिका विरुद्ध शंखघोष गर्ने केपी खोजिरहेको छु । कम्युनिष्ट एकता भन्दा प्रधानमन्त्री पदलाई महत्त्व दिने केपी होइन, श्रमजिवि वर्गको आन्दोलनलाई एकीकृत बनाउन त्याग गर्ने केपी खोजिरहेको छु । आफ्ना कदमहरु असंवैधानिक प्रमाणित भइसकेपछी पनि कुतर्कका सहारामा निर्लज्जता प्रकट गरिरहने केपी होइन, सर्वहारा नैतिकता प्रदर्शन गर्ने नैतिकवान केपी खोजिरहेको छु ’ अर्यालले लेख्नुभएको छ ।
आफूले अभिव्यक्तिहरुमा घोचपेच र छुद्रता भएको केपी नभई शभ्य र शालिन केपी खोजिरहेको अर्यालको भनाइ छ । आफ्ना नाममा जयजयकार गराउने केपी नभई कम्युनिष्ट आदर्श सिकाउने केपी खोजिरहेको, भन्दै उहाँले भन्नुभएको छ, ‘कम्युनिष्ट आन्दोलन विभाजित र टुटफुट भइरहेको बेलामा म कसरी ‘आइ लभ यू’ भन्न सक्छु ? मुस्कुराउन पनि सक्दिन ।’
यतिखेर आफूलाई हसाउने केपी नभई गम्भीर र वैचारिक मार्ग निर्देशन गर्ने केपी चाहिएको र त्यो केपी खोजिरहेको अर्यालले लेख्नुभएको छ । यसरी आफूलाई केपी ओली समूह किन छोडेको भन्ने शुभचिन्तकहरुलाई उल्टै प्रतिप्रश्न गर्नुहुँदै उहाँले भन्नुभएको छ, ‘मैले खोजिरहेको केपी तिमी मलाई दिन सक्छौं ?’
तत्कालीन नेकपा (एमाले) मा केन्द्रीय युवा तथा खेलकुद विभागका सचिव रहनुभएका नेता अर्यालले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको स्टाटस जस्ताको तस्तै :